Mari-nehupfumi page pageno
Svondo 17 Mbudzi 2019
Vashandi vakawanda vekanzuru yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa nehupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhanga sezvo mabhangi emuChinhoyi akawanda asati awana mari kubva kubanga guru renyika, reReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, kunyange haro rakaparura mari itsva munyika.
Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare asi mamwe mabhanga akaita seCABS anga aine mitsetse mirefurefu.
Vanhu vakawanda vafumobata jongwe muromo vachienda kumabhanga netarisiro yekuwana mari sevimbiso yebanga guru renyika asi vafambira dhongi rakaora.
Public Accounts Committee is worried by Sakunda Holdings’s failure to testify during Parliament’s enquiry into more than US$5 billion unauthorized expenditure in 2017 and 2018.
Chikwata cheHighlanders chaisa gumbo rimwe chete mumakwikwi e 2020 Caf Confederation Cup.
Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti mabhanga atanga neMuvhuro kutora mari itsva kubva kubhanga guru renyika paine tarisiro yekuti veruzhinji vanogona kutanga kuwana mari idzi kubva neChipiri.
Sangano Re PTUZ Rinoti Nhengo Dzaro Dzichashanda Zuva Rimwe Chete Pasvondo
Sangano rinomiririra varairidzi, re Progressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ) rinoti ragumbuka zvikuru negurukota rinoona nezvemari, VaMthuli Ncube, avo vanonzi vakapamhidzira mari kune vamwe vakuru vakuru vanoshanda muhurumende asi pasina chavapa varairidzi.
Mbudzi 10, 2019
Vamwe vashandi vekambani yeBoustead Beef Zimbabwe iyo yakanyorerana chibvumirano neCold Storage Company chekuyedza kumutsa kambani iyi.
Grain Millers Association of Zimbabwe iri kuyambira kuti mutengo wechingwa uri kutarisirwa kukwira zvakanyanya svondo rino.